Momo Jaomanonga – Blaogin'i Voniary
Étiquette : Momo Jaomanonga
Tsy raharahan’ny mpanoratra samirery na ny mpanonta sy ny edisiona fotsiny ny fampivelarana ireo asa soratra Malagasy. Misy anjara birikin’ny mpanao gazety, ny mpahay serasera, ny mpandraharaha ary indrindra ireoolon-tsotra, mpamaky ihany koa ao. Nafotaka tokoa ny fifanakalozan-kevitra miompana amin’ny boky tao anatin’ny « Cercle littéraire » izay notanterahin’ny fikambanana « Opération Bokiko » ny sabotsy 15 desambra lasa... Lire la Suite →
17 décembre 2018	 4
Ao anatin’ny taratasy roapolo, miendrika tononkalo no izaran’i Zaman’i Jao ny fiainana andavanandrony sy ny heviny amin’ny toe-javatra maro toy ny fandrosoana, politika ary ny adim-piainana. Nanapa-kevitra ny ila ravinahitra etsy andafin’ny riaka, etsy Mayotte, ny tovolahy ary avy any izy no mandefa ny ventsoventsony ho an’ireo havany aty an-tànana. Ao koa ireo hafatra tiana... Lire la Suite →